Taliska ciidamada Afrika oo beeniyay in askari uu ugaga dhintey Soomaaliya | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Taliska ciidamada Afrika oo beeniyay in askari uu ugaga dhintey Soomaaliya
Taliska ciidamada Afrika oo beeniyay in askari uu ugaga dhintey Soomaaliya
Taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika (AFRICOM) ayaa beeniyey war ka soo baxay Alshabaab oo sheegayay in askari Maraykan ah ay ku dileen duleedka magaalada Kismaayo kadib dagaal dhex maray ciidamada Kenya oo ay caawinayeen ciidamo Maraykan ah iyo maleeshiyaadka Alshabaab.
AFRICOM ayaa ku tilmaantay warka ka soo baxay Alshabaab inuu yahay mid aan waxba ka jirin oo laga yaqyaqsoodo askariga ka dhintay ciidamada Maraykankana uusan ahayn mid ku dhintey dagaal.
Warbaahinta Maraykanka ayaa sheegtay in Zachary Allan Bannister uu dhintey bishiii Oktoobar 17keedii balse uu ku dhintey saldhig ciidan oo ku yaal dalka Kenya. Wararka ay qoreen warbaahinta Maraykanka ayaa sheegaya in askarigaasi oo ka hawlgeli jiray saldhig ku yaalla Gobolka Xeebta ee LAMU ay u badan tahay inuu isagu isdiley.
Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon ayaan ilaa haatan sheegin wax askari Maraykan ah oo ku dhintay Soomaaliya wixii ka dambeeyey 3-dii October sanandkii 1993-kii, markaasi oo 18 askari oo Maraykan ah ay ku dhinteen dagaalkii Marayanku la galay Jeneraal Caydiid.
Ciidamo Maraykan ah ayaa sidoo kale haatan la taliyaal u ah ciidamada Soomaaliya gaar ahaan ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Danab.